Lapho ingane ihamba
Ilukuluku oluyisici sabo bonke abantwana lubenza babe yikhono eliwusizo lokukhahla.
Amanye amamama ngokungenandaba abhekisela ukuthi umntwana wabo uyanyuka yini noma cha. "Lapha ukuqala ukuhamba nguyebo! Futhi akudingekile ukuba bakhuke nhlobo, "bacabanga, futhi kubonakala sengathi kunezinto ezincane zokukhathazeka ngesibalo sokulala nokuqamba amanga, kuyilapho isikhathi sokuqhafaza mhlawumbe kubaluleke kakhulu ekuthuthukiseni kwengqondo nemvelo. isikhala sendawo esihlala kuyo emva kokuhlala futhi sibheka ngokuya kwesinye isikhathi.
Uthola ama-horizons amasha , izihloko ezihlukahlukene, aqala ukwenza izinqumo: kuphi nokuthi kungani kufanele ahambe. Ngaphambi kwengane kunemigomo eminingi, futhi lapho ithola ithoyizi, ifunda ukuzithuthukisa: iye yaqhamuka - uyamukele. Izinto ezithakazelisayo ezengeziwe zizobe zizungeze umntwana, lapho ikhono lakhe lokukhuphuka liqhubeka khona. Futhi okunye okuthandayo, ngokushesha uzofunda ukunqoba izithiyo, ukuthuthukisa amandla omzimba nokukhuthazela. Ngaphezu kwalokho, ukufunda izindlela ezahlukene zokuhamba - phambili, emuva, ngendlela yepulasitiki, kuzo zonke ezine, ukushintsha ijubane lokunyakaza - isilayidi encane izoqala ukufunda ubudlelwane nezimbangela. Ekhanda lakhe imicabango enjalo iyazalwa: "Uma uhambisa unyawo lwakho njengalokhu, ngizogwaza ngokushesha, futhi uma ngincike esibambeni njengalokhu, ukunyakaza kuzothuthuka." Ukusebenza okunjalo okunengqondo kusiza ekuthuthukiseni imvuthu.
Ungaqonda kanjani ukuthi ingane yakho ilungele ukuba isilayidi? Qaphela imvuthu. Kusukela ezinyangeni ezingaba ngu-6 ubudala, ngokuphindaphindiwe uyoba nesithakazelo ezintweni ezizungezile, uzoba nesifiso sokuzithola, ukuthinta, ukutadisha. Futhi ngesikhathi esifanayo, umcabango uzofika ekhanda lakhe: "Ngingakwenza kanjani lokhu?" Ngokumxosha ngesifiso sokuthola ithoyizi, ngaleyo ndlela uzothuthukisa amakhono okukhwabanisa kwengane.
Phakathi nemidlalo, ngokuvamile ubeka ithoyizi phambi komncane bese ubona ukuthi uzolwela kanjani ukuyithola. Ekuqaleni, umntwana uzokhipha izimbambo, bese ephonsa umzimba wakhe wonke phambili, ebopha ngaphansi kwemilenze yakhe. Khona-ke, ukuze ashintshe isikhungo sedonsela phansi, imbongolo yakhe iyovuka, kodwa cishe cishe okokuqala, iyobuyela emuva. Mhlawumbe, ukuze ufezekise umgomo oyifunayo, ingane izoqala ukuwela kuyo ngendlela ephikisayo. Kodwa ngolunye usuku umntwana uzofika kuzo zonke ezine. Isikhathi sokuqala angeke akhathazeke ngenxa yesimo esingazinzile kakhulu: isisu esinzima siyodonsa phansi.
Njengoba emi kancane kangaka , uzoqala ukuzivumelanisa nezitayela ezahlukene zokukhahlela. Mhlawumbe kuzobonakala sengathi kulula kakhulu ukuhamba nezimbambo ezicindezelwe phansi, kanye nembongolo ehlasele. Noma, ngokuphambene nalokho, ingxenye engaphezulu ye-trunk iphakanyisiwe, kanti phansi iphinde icindezelwe phansi, futhi ingane izohamba, ixhomeke ezandleni zakhe. Ngezinye izikhathi ingane iphonsa umzimba phambili nge-jerks, iphoqa izinyawo. Lokhu kuhamba kufana nokujula i-frog encane. Abanye abadicileli abafuni ukuqhubekela phambili, futhi ngaso sonke isikhathi emuva. Lokhu kungenxa yokuthi ingane iqhuma izibambiso ngaphambi kwemilenze enezibambo. Ngesikhathi sokuhlolwa okunjalo ungamphazamisi futhi unike ithuba lokuzama konke.
Kodwa ngenkathi ingane ingagqamuki isisu sayo phansi, okwamanje, isikhwama esigcwele sisekhona ngaphambi kwakhe. Ngakho ngelinye ilanga uzothola isenzakalo esimnandi: ingane izofika kuwo wonke ama-four, bese ingaphansi kwamandla adonsela phansi, i-pussy iyowela phezu kwembongolo noma isisu, bese ivuka futhi, iguqa ngemuva njenge-kitty encane futhi, ixhomeke ekuthineni nasemilenzeni, iyoqhubekela phambili ngokuzethemba ngokuzethemba umgomo othandekayo.
Ekuqaleni uzama ukukhamba, ukuphoqa isibambo esifanayo nomlenze phambili. Kodwa ukunyakaza okunjalo kubonakala kungenakulinganiswa kakhulu, ngakho-ke uzoqonda ngokushesha ukuthi ukuze agcine ibhalansi yakhe, kubalulekile ukuthi enze ukuhamba okunye ngesandla sakhe sokunene nesokunxele nonyawo lwakhe. Ingane izozama ukusunduza isibambo ngakwesinye icala nomlenze kwenye. I-pose enjalo izomsiza ukuba alondoloze ukulinganisela emlenzeni nasemlenzeni njengoba ephakamisa enye ingalo nomlenze. Lokhu kuzoba yisikhathi esivela ngaso isikhathi sokusebenza okuhamba kahle nokulungile kunazo zonke. Uzofunda ukugcina ukulinganisela kwakhe futhi isikhathi esifushane uzoqala ukunqoba imingcele enkulu kuye, uzofinyelela ngokushesha umgomo oyifunayo, futhi ingqondo yakhe izoqala ukuthuthukisa ngokwengeziwe.
Uma i-crumb ingafuni ukukhasa, yiba nesineke bese uzama ukumsiza kulokhu. Spread ingubo phansi, ubeke umntwana kuso futhi uhambe kaningi eceleni kwalo. Ngeke esabe ukufunda isikhala esisha, ngoba umama usondelene. Uzothatha isibindi futhi aqale ukwenza ngokugcwele.
Ngaphezu kwalokho, zonke izingane ziyizinkawu ezincane futhi zithanda ukulingisa abantu abadala. Ngakho vuka kuzo zonke ezine bese ubonisa ukuthi kufanele ukwenze.
Hlaka, smile, futhi njengomvuzo, thatha ithoyizi bese uyibonisa ingane. Bese uyifaka phambi kwakhe, ufake i-roller ngaphansi kwezithende. Uzoshaya futhi enze owokuqala aphonse phambili. Ngezinye izikhathi ithoyizi ayisona isisusa somntwana, okufunayo ukwenza umzamo. Zama ukushintsha izinto, bheka labo abathandayo. Abanye abantu bathanda izingcezu zephepha, ama-candy e-golden wrappers noma izinto "ezikhulile" - kude nokubekwe eceleni kwe-TV, ifoni ephathekayo. "Ukubona umgomo okhanga, ingane ikhuluma ngokuqondile.
Ukwandisa isifiso sokukhahlaza kuzosiza inkambo yokusikhipha.
Zama ukwenza izivivinyo ezikhethekile nge-roller. Beka ngaphansi kwesifuba somntwana, thatha imvuthuluka yemilenze bese uphuqa emuva, vumela izandla zakhe ziphumule ngesikhathi esifanayo phansi. Uma ingane ihamba kuphela ngendlela yepulasitiki, zama izikhathi eziningana ngosuku ukuze ulethe imilenze yakhe esiswini bese ubaxosha kancane. Ngokushesha uzozizwa eqinile futhi azovuka ngamadolo, encike ngaleyo ndlela. Ngemuva kokuthi i-crumb iqala ukunyuka, yinikeze imisebenzi yokwanda okuyinkimbinkimbi. Isibonelo, unqobe isithiyo. Beka i-roller phakathi kwakhe nesitokisi, makazame ukukhasa phezu kwayo. Mhlawumbe okokuqala okokuqala akukho lutho oluzophuma, luzoqhuma futhi lube nomsindo.
Duduza futhi uphinde unikezele ukuphinda. Izingane ezihlakaniphile kunazo zonke azikwazi ukukhahlela, kodwa zijikeleze nxazonke. Umntwana ohlakaniphile ngokuqinisekile uyisikhathi sokuziqhenya kwabazali! Ngezinye izikhathi ukuthuthukiswa kwamakhono okukhwabanisa kuphethwe yikholo eliqinile labazali lokuthi ubulili akuyona indawo yezinhlanzi. Kulesi simo, usakaze ingubo noma ingubo ebhodini. Gqoka ingane enomzimba ovulekile, ngakho izandla zakhe nezinyawo zizobe zithinteka kangcono phezulu.
Uma i-crumb iqala ukuhamba kusuka kule ndawo kuze kube phansi, yibeke emilenzeni yamapenti noma ama-sliders. Futhi shiya izinyawo zakho zivuleke, ngoba emasokisini bazokwehlisa futhi baphazamise ukuzinza.
Vumela amakilasi ekufundeni ukukhwela amakhono abe kokubili wena nomntwana umdlalo othakazelisayo. Futhi-ke ingane yakho izoqala ngokushesha ukuhamba nxazonke zendlu yonke yazo.
Ingane ayifuni ukufunda ukufunda
Ingane ayidlala amathoyizi
Umsebenzi wengane njengentuthuko yengqondo
Ingane ayikhulumi ngonyaka
Ukubaluleka kwemidlalo yezingane zasenkulisa
Uma ingane ingafuni ukuya enkulisa
Izimbali ezingaphandle: i-pteris
I-compote yama-lingonberries nama-apula
I-Talisman ye-Feng Shui Star Star
Izitshalo zangaphakathi ezinganeni zezingane
Izinja zesiWelgi Corgi Pembroke
Indlu yami iyinqaba yami: ingaphakathi laseMelika
Ukudla okunempilo kokunciphisa umzimba
I-Horoscope ye-Virgo ngo-2011
I-zucchini eqoshiwe ngesitayela seLigurian
Ukuphepha kwezingane entwasahlobo emgwaqeni
Imifino ewusizo yomzimba womuntu
Indlela yokwenza i-SPA manicure?
Indlela yokukhulula i-colic ezinsaneni
Umkami kaPaul Priluchny wagxila kwividiyo ehlambalaza
Ukwazi abafana basuka phesheya
Indlela yokunakekela izinwele ekhaya?
Udokotela u-Yaroslav Boyko nendima yakhe ebhayisikobho